Miyaad kugula talin kartaa inaad dib u soo iibsato backlots blogs (PBNs)?
Anigana aniga ma soo jeedin karo, mana tusi karo sida ugu horeysa ee lagu tijaabiyo. Wax walbaa waa inaan anigu shakhsi ahaan u dareemeynin sida Gray-Hat SEO, ama Ilaah ma diido Black-Hat SEO. Iyo dib u iibsashada backlinks ka blogs khaas ah gaar ah waa nidaam si cad loo tabooed ka neceb Google ka badan. Waxaan aaminsanahay in dib u helida lacagaha dib u bixinta ee shabakadaha shabakadaha (PBNs), ayadoon loo eegin sida ay ugu guuleeysteen xilligan, malaha habka ugu fudud ee lagu kasbado culus oo aan dhibsan karin (mararka qaarkood xitaa aan lumin karin). Si kastaba ha ahaatee, blogska khaaska ah ayaa weli ah caan ah, waxaanan sidoo kale arkay dad badan oo websayada ah oo ku raaxaysanaya heshiiska iyo ka faa'iideysiga horumarka aadka u sarreeya ee aadka u sarreeya ee SEO-ga ah
. Laakiin waa maxay runta? Sidee loo qaadaa go'aan qoto-dheer oo ku saabsan dib-u-qabasho ka soo baxa shabakadaha shabakadaha? Aynu isku dayno inaan wax walba ka dhigno - kaliya oo leh xaqiiqooyin xaqiiqo gaaban iyo talooyinkeyga kooban si ay u miisaamaan khibradooda iyo xayawaanka. Ka dib, waxa kaliya ee adiga kugu habboon inaad go'aansato.
Backlinks oo ka socda Shabakadaha Shabakadaha waa ay fiicantahay:
Iyada oo la xakamaynayo SEO, waxaan ula jeedaa inaad ka heli karto faa'iido xoog leh tartamayaashaada. Wax walba waa sahlan - iibsashada xiriirka ka imaanaya PBNs micnaheedu waa inaad xor u tahay inaad ku xaddidid xiriiriyeyaashaada sida waalan si loo tijaabiyo fursadaha suurtogalka ah ee isku xirka iyo iskudhacyada qoraalka. Haa, waa muuqaal qurux badan oo soo jiidasho leh - sababtoo ah ma jirto istiraatiijiyad kale oo bixisa xorriyadda si loo hubiyo wax walba oo ficil ah - halkan iyo hadda.
Ka faa'iideysiga awoodda deg dega ah, sida PBNs waxaad awood u yeelan kartaa maamulka da'da ah ee aadka u aaminsan ee bogga hore u jirey. Dib-u-soo-iibinta backlinks ee blog-ka shabakada waxay u muuqan kartaa mid aad u soo jiidasho leh, gaar ahaan marka la tixgelinayo in noocyada xiriirka ahi si gaar ah u adagtahay in lagu dhiso qaab si dabiici ah.
Dhawridda iyo dadaalka badan, sababtoo ah inaad ku qorto PBNs - uma baahnid inaad la shaqeyso wacyigalinta ama dhisida xiriiryo kale. Aniga ahaan, hawshani waa mid adag oo lagu ogaanayo fursadaha saxda ah ee waxqabadka waa midka ugu xun ee isku dayga wakhti wakhti badan dhaca ee aan abid.
Inkastoo PBNs ay yihiin dad aad u macquul ah, waxay albaabbada u furayaan inay wajahaan xitaa ugu dambeyntii caqabadaha adag ee dhismaha xidhiidhka dhaqameed. Waxaan u jeedaa, tusaale ahaan, mararka qaarkood waxay ku dhowdahay in ay ku kasbato sifooyinkan sare ee PR oo ka soo jeeda da'da da'da ah ee la aamini karo. Hawlgalku wuxuu u muuqdaa mid aan la maarayn karin xitaa ka hor intaanad gaadhin, ugu yaraan adigoon jebinin xeerarka. Dhammaan wixii ka dambeeya, maalgelinta wakhtiga iyo dadaalkaaga ku aaddan dhisida xidhiidhka dhabta ah ama wixii kale ee muhiimka ah - marna ku siin kara wax rajo ama natiijooyin la filayo, maaha in la sheego horumar ballanqaadka ah ee shuraako dheer.
Waa hagaag, halkan waa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee ku saabsan dhabarka dambe ee shabakadaha shabakadaha, kaliya iyada oo loo marayo dhammaystirka. Xaaladda ugu xumayd, iyada oo la adeegsanayo PBNs for link building waxay keeni kartaa ciqaab macquul ah - mararka qaarkood waxay xitaa tagi kartaa xagjirnimo marka wax kasta ay ku dhammaadaan ganaax joogta ah ee raadinta. Haddii ay sidaas dhacdo, ma jiri doonto wax laga qabanayo, marka laga reebo dhisida boggaaga nasiib darrada ah ama blogka mar kale - laga bilaabo bilowga Source .